Maka bixi lahayd qabiilkaaga? - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka Foosiya Maxamed Ciise
Image caption "Ka bax Qabiilkaaga"
Inkastoo qur'aanka kariimka ay ku jirto aayad sheegaysa in sababta qabiilka loo sameeyey ay tahay isku aqoonsi, iyadoo ay taasina ka macano tahay in qabiilka uusan khuseynin dagaal iyo siheyb sooc toona.
Xildhibaan Faliije: Askari baa igu yiri "xildhibaan aniga iima tihid, beel baad u tahay"
Haddaba waxaa jira hay'ado iyo shakhsiyaad sameeya ol'oleyaal looga soo horjeedo qabyaaladda ragaadisay bulshada Soomaalida.
Image caption Gabadhan ayaa ol'olaheeda qabyaaladda ka dhanka ah ka wadda baraha bulshada
Wareysi ay la yeelatay laanta Afsoomaaliga ee BBC-da ayey ku sheegtay inay ku dhalatay fikraddaasi ka dib markii ay aragtay sida uu qabiilka Soomaalida ugu weyn yahay, waxayna sameesatay hal ku dhig ah "ka bax qabiilkaaga" .
"Soomaali haddeynu nahay, marba haddii aad qabiilkaaga taqaanid qabyaaladda joojin meysid, marka si uu qofku qabyaaladda u joojiyo waa in qabiilkiisa uu garashadii mooyee uusan qiimo kale la yeelanin, sidaas darteed ol'olaheyga waxaan ku adkeeyay halkudhigga ah 'ka bax qabiilkaaga', dhaqdhaqaaqaas erayada uu ku howl galo waa: 'Ka bax qabiilkaaga, Dhis noloshaada, Quwee dowladdaada, Soomaali waligaa ahow', marka waxaan arkay inay tahay kalmad u baahan in lagu celceliyo dadka maskaxdooda ilaa uu qofku ka ba'o dareenka qabyaaladda", ayey tidhi Foosiya.
Foosiya ayaa sharraxaad ka bixisay sababta ku kalliftay inay howshan u istaagto, waxayna tidhi: "Waxyaabaha igu kallifay waxaa ka mid ah in doonayo in dadka maskaxdooda aan ka masaxo qabiilkii na baabi'iyay,ee afka uun laga sheegayay".